के ओखर मस्तिष्कका लागि उपयोगी हुन्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
के ओखर मस्तिष्कका लागि उपयोगी हुन्छ ?
एउटा सामान्य बुझाई छ, प्रकृतिले जुन रुपरेखाको फल दिएका छन् त्यो हाम्रो शरीरका अंगको स्वरुपसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । अतः हाम्रो अंगसँग जुन फलको रुपरेखा मिल्छ, त्यसको सेवनले सोही अंगलाई फाइदा गर्छ ।
जस्तो स्याउको समग्र आकार करिब मुटुसँग मिल्छ । यसको सेवन मुटुको लागि फाइदा हुने बताइन्छ । राजमाको रुपरंग मिर्गौलासँग मिल्छ । यसको सेवनले मिर्गौलालाई स्वस्थ राख्न सहयोग हुने बताइन्छ । यस्तै ओखरको भित्री तह पनि हाम्रो मस्तिष्कको स्वरुपमा हुन्छ । त्यसो भए के यो फल मस्तिष्कको लागि उपयोगी छ त ?
ओखरलाई ‘ब्रेन फुड’ भनिन्छ, जसले मस्तिष्कलाई स्वस्थ्य राख्न सघाउँछ । ओखरमा केहि शक्तिशाली न्युरो प्रोटेक्टिभ कम्पाउन्ड पाइन्छ, जस्तो कि, भिटामिन इ, ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिड, फोलेट, एन्टिअक्सिडेन्ट । यसले मस्तिष्कलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ । साथै यसले रक्तप्रवाहलाई नियमित गराउन समेत सहयोग गर्छ । यसमा अधिक मात्रामा पोषक तत्व पाइन्छ । त्यसो त ओखरको तेल छाला र केसलाई मुलायम एवं चम्किलो बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ ।
ओखरमा सोडियम कम र कालोस्टर पनि पटक्कै हुँदैन । यसमा भरपुर मात्रामा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड हुन्छ । यसमा भिटामिन ए, बि–६, बि–१२, सि, डि, इ र के पाइन्छ । यो प्रोटिनको पनि राम्रो स्रोत हो । यसका साथै क्याल्सियम, मिनरल्स, म्यानेसियम, आइरन, फस्फोरस, जिंक, कपर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यो एन्टिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो ।
प्रोटिन– यसले मांशपेशी बढाउन सहयोग गर्छ । एक सय ग्राम ओखरमा १५ ग्राम प्रोटिन हुन्छ ।
भिटामिन डि यसले क्याल्सियम ग्रहण गर्न सहयोग गर्छ । हड्डीका लागि क्याल्सियम एकदमै जरुरी हुन्छ ।
फोलेट वा फालिक एसिड यसले मस्तिष्कलाई स्वस्थ्य राख्छ ।
ओमेगा ३ फ्याटी एसिड मुटुलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि सहयोगी हुन्छ ।
बिहान र मध्यन्ह दुई वटा ओखर चपाएर खानुपर्छ, जसले कोलोस्ट्रोर नियन्त्रण गर्छ । हृदय रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।
ओखर खाँदा पेट लामो समयसम्म भरिन्छ । यसले गर्दा छिटै भोक लाग्ने हुँदैन, फलत ओभर इटिङबाट बचाउँछ । तौल नियन्त्रणका लागि पनि ओखर सहि हुन्छ ।
नियमित रुपले दुई वटा ओखर महसँग मिसाएर सेवन गर्नाले मस्तिष्क स्वस्थ्य हुन्छ । साथै स्मृति क्षमता पनि बढ्छ । स्ट्रोकको भयबाट बचाउँछ ।
दुई वटा ओखर, एउटा बदाम बिहान–बेलुकी मनतातो दुधसँग सेवन गर्दा कमजोरी हट्छ ।
महिनावरीको समस्यामा ओखर र मह मिसाएर मनतातो दुधसँग पिउनुपर्छ, ठीक हुन्छ ।
रुँघा खोकीको उपचारमा समेत ओखर उपयोगी हुन्छ । ओखरलाई हल्का भुटेर महसँग सेवन गर्नुपर्छ, खोकी ठिक हुन्छ ।
ओखरको बोक्रा पिसेर त्यसले दाँत सफा गर्नुपर्छ, दाँत स्वस्थ्य र चम्किलो हुन्छ ।
तातो दुधसँग ओखर सेवन गर्दा पेटको जुका मर्छ ।
मनतातो पानीसँग ओखर सेवन गर्दा जोर्नीको दुखाई समेत ठीक हुन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार